Uphando lweNtengiso ye-B2B: Izibonelelo ezi-9 zeNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
Uphando lweNtengiso lweB2B: Izibonelelo ezi-9 zeNtengiso yezeNtlalontle
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 18, 2015 Douglas Karr
Iqela kuhlangulo lweshishini lokwenyani belibonelela ngale datha Aqhuba njani amashishini e-B2B ukujongana neMedia Media iminyaka embalwa ngoku kwaye uyihlaziye ngo-2015. Uphando lubonelela ngezibalo zizonke ze-B2B zentengiso yokwamkelwa kwemithombo yeendaba zentlalo kwaye zikhomba kwizibonelelo ezili-9 ezibonwayo ziinkampani ze-B2B:
Phuhlisa abalandeli abathembekileyo
Nika ingqiqo kwindawo yentengiso
Phucula umgangatho wokukhangela
Khulisa ubuhlakani beshishini
Ukunciphisa iindleko zokuthengisa
Ayicaci gca kunoko. Ndisakholelwa ukuba iinkampani ze-B2B ziyithathela kancinci impembelelo yexesha elide enziwa kukuthengisa kwimithombo yeendaba kwiindawo ezininzi. Ndothuswa ngokunyanisekileyo yile inethiwekhi yokuncokola yayingelilo isibonelelo esidwelisiweyo- kodwa mhlawumbi ukukhula kwenethiwekhi yakho kuwela phantsi kokuvezwa kunye nentsebenziswano kwishishini. Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba iinkampani ezihlala zinxibelelana nathi zifumana ukubonakaliswa okungaphezulu kunoko zinxibelelana nathi kube kanye kwaye zishiya.
Ixesha le-B2B lihlala lishiywa kumbono okanye kumthengi, hayi umjikelo wentengiso okanye ixesha lokukhankasela ukuthengisa. Ngenxa yoko, ifuna ukuba amashishini akhule ngokufanelekileyo kwaye alondoloze igunya lawo kwimidiya yoluntu. Qhubeka nokubonelela ngexabiso kwaye uya kwakha ubudlelwane obuxabisekileyo.
tags: Ukuthengisa kwe-b2bb2b izibonelelo zentengisob2b izibonelelo zentengiso yemidiya yoluntu
Yakha intengiso yakho yesiqulatho ngokuchonga ezi zithuba zintandathu
Iindlela ezi-7 eziGuqula iiNkqubo zeMfono
Feb 19, 2015 ngo-8: 54 AM
I-infographic emnandi malunga nemidiya yoluntu.
Ngexesha ledijithali, imidiya yoluntu kufuneka isetyenziswe ukuqhuba nawaphi na amashishini abandakanya ishishini le-intanethi kunye neshishini elingaxhunyiwe kwi-intanethi. Kwaye ugcine ubudlelwane obuhle kubathengi.